Next-Generation Fuel Cell Vehicle ရဲ့နာမည်ကိုကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Hyundai! – AutoMyanmar
Next-Generation Fuel Cell Vehicle ရဲ့နာမည်ကိုကြေညာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Hyundai!
Hyundai Motor Corp ဟာ ၂၀၁၈ CES မှာပါဝင်ပြီး Next-generation hydrogen-powered fuel cell electric vehicle တွေပြသမယ့်အကြောင်းနဲ့ အနာဂတ်နည်းပညာတွေ မိတ်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းကို မနေ့က ကျွန်တော်တို့ Website မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါ လင့်ကနေဝင်ရောက်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆက်မယ့်ကားအမျိုးအစား ကိုဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် ကားရဲ့နာမည်ကိုတော့ မဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။ CES 2018 မှာ Hyundai တရားဝင်ချပြမယ့် Hyundai ရဲ့ Next generation fuel cell vehicle ကတော့ Nexo ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nexo ပုံအလန်းလေးကိုတော့ article ရဲ့အောက်ဆုံးမှာဖော်ပြထားပေးပါတယ်။
Nexo ဟာ Hyundai ရဲ့ Next generation fuel cell vehicle ဖြစ်သလို Hyundai ရဲ့ Eco-Vehicle edition ဖြန့်ချီမှုမှာ ဉီးဆောင်နေတဲ့ Vehicle တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Nexo Model ဟာ Hyundai ရဲ့ LEV (Low emission vehicle) တွေဖြန့်ချီမယ့် အစီအစဉ်ကိုဉီးဆောင်နေပြီး ပိုမိုအားကောင်းစေတဲ့ model တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Hyundai Motor အနေနဲ့ လာမယ့် ၂၀၂၅ မှာ eco-friendly model ၁၈ ခုကို global market မှာမိတ်ဆက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Next-Generation Fuel Cell Vehicle ဆိုတော့ အရင်က generation တစ်ခုများရှိခဲ့လို့လား?
Hyundai အနေနဲ့ Tucson fuel cell ဆိုပြီး Hydrogen-powered fuel cell electric vehicle ကိုအရင်ကတည်းက မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့် CES 2018 မှာချပြမယ့် Nexo ဟာ Next-Generation ဖြစ်သွားတာပါ။
Nexo ရဲ့အရှေ့က generation ကTucson fuel cell ဆိုတာကို ကျွန်တော်လည်း Dr. Woong-chul Yang ပြောတာကြည့်ပြီးမှသိသွားတာပါ။ Dr. Woong-chul Yang ဆိုသူကတော့ Hyundai Motor Company ရဲ့ Vice-chairman ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nexo မှာရှေ့က generation ထက်ဘာတွေပိုကောင်းသွားလဲဆိုတာကိုတော့ အောက်ပါပုံကြည့်ပြီးသိရှိနိုင်မှာပါ။
#NEXO: The Next-Generation #Fuel_Cell Vehicle From #Hyundai—https://t.co/A50P29QemY pic.twitter.com/DcV41MTsr6
— FuelCellsWorks (@fuelcellsworks) January 8, 2018
Hyundai, Motor Show and Event, Nexo